Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in computer iyo computer si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Computer iyo Computer si ay iPhone
Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xiriirada iPhone in computer u gurmad ama daabacaadda soo baxay, laakiin ma doonayo in aan u hagaagsan in account Google? Hel iPhone cusub oo hadda doonaya in ay u gudbiyaan xiriirada ka computer leh? Waa fud. Qaybta hoose ku siinaysaa xal fudud inay ka sameeyaan. Iska akhriso on.
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in computer Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka computer si iPhone
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in computer
Habka ugu fudud ee aad nuqulka xiriir iPhone in computer waa in ay kaalmo ka ah qalab dhinac saddexaad weydii. Wondershare TunesGo waa iPhone ah in software kala iibsiga computer taas oo ka caawisa inay nuqul ka dhan ama soo xulay xiriirada ka iPhone in computer. Xiriiro noqon kartaa mooyee sidii hal ama dhowr ah file a vCard (s), ama file CSV ah.
Xiriirada Transfer, music, sawiro, video iyo farriimo ka iPhone in computer si fudud.
Dhoofinta iPhone xiriirada in computer iyo badbaadin sida file vCard (s) ama file CSV ah.
Nidaameed iPhone xiriirada in Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka & Windows Live Mail.
Ku dar, xaalkaa xiriirada iPhone, iyo kuwa ku milmaan nuqul kombiyuutarka.
Xiriirada nidaameed ka computer si iPhone ku yaalla.
Maamul xiriirada ee xasuusta telefoonka, iCloud, Yahoo !, Hotmail, iwm si fudud.
Si fiican u shaqeeyaan iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5 / 5C / 3GS / 4 / 4G in ay maamulaan macruufka 9/8/7/5/6.
Sida loo hagaagsan xiriirada ka iPhone in computer
Tallaabada 1. Connect iPhone in computer iyo ordi qalab
Ka dib markii ay soo degsado, rakibi iPhone in ay xiriir computer kala iibsiga qalab kombiyuutarka. Bareesada in cable UBS ah in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer.Once ee la aqoonsan yahay, aad iPhone muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2 . nidaameed iPhone xiriirada in computer
Tag galeeysid bidix, guji saddexagalka ee soo socota si ay u Xiriirada . Tani waxay keenaysaa oo dhan catelogories xiriir. Dooro mid ka mid category, sida On My iDevice ama iCloud. Markaas, xiriirada ee qaybta ka soo muuqanayaan xaq.
Dooro xiriirada aad doonayay oo guji Import / Dhoofinta > dhoofinta soo xulay Xiriirada > dhoofinta Dhammaan Xiriirada . Liiska hoos-hoos A booda. Si loo badbaadiyo iPhone xiriirada in computer, waxaad dooran kartaa in a vCard File Single , in Multiple vCard Files ama in CSV File . Markaas, caleenta your computer si aad u hesho meel ay u badbaadin xiriirrada dhoofiyo.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo iPhone si qalab kala iibsiga computer, waxa kale oo aad kartaa dhoofin xiriirada iPhone in Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010/2013 , Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail.
Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka computer si iPhone
Haddii aad synced xiriirada si iCloud ama Gmail ka hor, hadda waxaad si fudud u heli karaan xiriirada dib si aad u iPhone. Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa qalab xisbiga saddexaad si ay u dajiyaan xiriirada ka computer si iPhone. Halkan, waxaan muujinaya sida aad u hagaagsan xiriirada Gmail si iPhone iyo sida loo isticmaalo TunesGo Wondershare in ay dajiyaan xiriirada ka VCF / CSV soo gudbin si iPhone.
Nidaameed Gmail xiriirada si iPhone
Import file CSV / VCF si iPhone
1. xiriirada Upload ka computer in Gmail
Tallaabada 1. Open Google browser internet-ka. Saxiix in aad xisaabta iyo Gmail bogga dhulka.
Tallaabada 2. column bidix, guji Gmail > Xiriirada si ay u muujiyaan guddi gacanta xiriir ah.
Tallaabada 3. Riix More si ay u muujiyaan in ay menu jiido hoos. Dooro Import ... . In wada hadal pop-up ah, guji Dooro File .
Tallaabada 4. Browse your computer si aad u hesho CSV ama vCard file badbaadiyey halkaas oo xiriir waxaa la badbaadiyey. Markaas, guji Open > Import in ay dajiyaan xiriirada aad doonayay in Gmail.
2. nidaameed Google xiriir si iPhone
Tallaabada 5. aad iPhone macruufka socda 5/6, tuubada Settings . Hoos si aad u hesho Mail, Xiriirada, Kalandarada . Tubada dar xisaabta iyo dooran Google .
Tallaabada 6. Ku buuxi magacaaga, Email, sirta ah iyo sharaxaad. (Daar network Wi-Fi).
Tallaabada 7. Tubada Next iyo shid Xiriirada . Markaas, ka jaftaa Save si hagaagsan Gmail xiriirada si iPhone. Marka u hagaagsan la dhammeeyo, waxaad tagtaa Xiriirada app iyo xiriirada Google midig waxaa jiri doona.
Fiiro gaar ah: Haddii aad iPhone waxaa socda macruufka 7, guji halkan si aad u barato sida loo hagaagsan xiriirada Gmail.
Haddii aadan rabin in u hagaagsan xiriirada Gmail oo aad rabto hab fudud, ka TunesGo Wondershare waa doorasho wanaagsan. Waxa aad ku xoojiya sidii ay dajiyaan xiriirada ka hal ama dhowr ah file a VCF (s), file CSV ah, Outlook, Windows Live Mail iyo Windows Cinwaanka Book si iPhone effortlessly.
Tallaabada 1. Iska aad iPhone xiran via cable USB ah oo ay maamulaan qalab
Si aan ku bilaabo, rakibi qalab this on your computer. Ka dib markii in, ay u maamulaan. Connect aad iPhone la kombiyuutarka via cable USB soo socda aad iPhone. Qalabkani waxa uu isla goobtii lagu ogaan doonaa iPhone oo ka dibna soo bandhigaan macluumaadka ee column bidix kooxda ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. xiriirada ka dhaqaaq oo computer si iPhone
Markaas, guji Xiriirada in column-ka tagay kooxda reer inay soo qaadaan suuqa kala xiriir maamulka ah. Riix Import / Dhoofinta > xiriir Import ka computer .
In liiska hoos-hoos u, xusho oo aad go'aansato in aad soo dhoofsadaan xiriiro. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa ka file vCard . Marka uu furmo suuqa yar file browser u muuqataa, doorto aad file doonayo VCF (s), file CSV. Markaas, xiriirada dejinta kombiyuutar si ay iPhone.
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Xiriirada in vCard File?
Sida loo kaabta iPhone Xiriirada in Gmail?
Sida loo Copy Photo Library ka iPhone in Computer?
Sida loo dhaqaaq Roll Camera ka iPhone in Computer?
Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka iPhone in Computer?
Tansee iPhone SMS Transfer Alternative si ay u gudbiyaan SMS?
Bedelan karo oo bilaash ah si ay u Lugood inaad maarayso iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Playlists ka iPhone in Lugood?
Waxaa jiri doona ah iPhone 7 ama iPhone 6s?
5 jidadkooda Sida loo Helo IMEI on iPhone
Top 10 iPhone Amniga Talooyin & Common iPhone Arrimaha iyo Qaraarada Security
Sida loo yareeyo iPhone 4s Video Size
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Computer iyo Computer si ay iPhone